Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo May 5, 2020.
DT2 • Downtown Dutchtown (“anaga”, “anaga”, ama “kuweena”) waxay ka shaqeeyaan mareegaha dutchtownstl.org (Adeegga).
Boggan wuxuu kugu wargalinayaa siyaasadeena ku saabsan ururinta, isticmaalka iyo bixinta Macluumaadka Shakhsiyeed markaad adeegsanayso adeegeena.
Uma isticmaali doonno ama aan macluumaadkaaga la wadaagi doonno qofkasta marka laga reebo sida lagu sharraxay Siyaasaddaan Khaaska ah.
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed bixinta iyo hagaajinta Adeegga. Adoo adeegsanaya Adeegga, waxaad ogolaatay ururinta iyo isticmaalka macluumaadka si waafaqsan qaanuunkaan. Haddii aan si kale loogu qeexin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, ereyada loo adeegsaday Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay leeyihiin macnayaal la mid ah Shuruudaha iyo Xaaladaheena, oo laga heli karo dutchtownstl.org.
Ururinta Macluumaadka iyo Isticmaalka
Inta aan adeegsanayno Adeegyadeena, waxaa laga yaabaa inaan ku weydiisanno inaad na siiso macluumaad shaqsiyadeed oo la aqoonsan karo oo loo isticmaali karo in lagula xiriiro ama lagugu aqoonsado. Macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo ("Macluumaadka Shakhsiyeed") ayaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn:
Macluumaadka Ku qor
Waxaan ururinaa macluumaadka uu biraawsarkaagu soo diro mar kasta oo aad booqato Adeeggeena ("Diiwaanka Diiwaanka"). Macluumaadka Diiwaanka waxaa ku jiri kara macluumaad sida borotokoolka Internetka ee kumbuyuutarkaaga ("IP"), nooca biraawsarka, nooca biraawsarka, bogagga Adeegga aad booqato, waqtiga iyo taariikhda booqashadaada, waqtiga ku qaatay bogaggaas iyo kuwa kale tirakoobka.
Kukiyada waa faylal leh xog yar, oo ay kujirto aqoonsi aan lagaranaynin. Kukiyada waxaa loo diraa biraawsarkaaga websaydhka oo waxaa lagu kaydiyaa kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka.
Waxaan u adeegsanaa "cookies" si aan u ururino macluumaadka. Waad u sheegi kartaa biraawsarkaaga inuu diido dhamaan cookies-ka ama inuu tilmaamo goorta la direy cookie. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aqbalin cookies-ka, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad isticmaasho qaybo ka mid ah Adeeggeenna.
Waxaa laga yaabaa inaan shaqaaleyno shirkadaha iyo shakhsiyaadka sadexaad si ay u fududeeyaan adeeggayaga, si aan u siino adeegga magacaaga, si aan u fulino adeega la xidhiidha adeega ama inaan naga caawino sidii loo falanqeyn lahaa sida Adeeggayaga loo isticmaalo.
Dhinacyada saddexaad waxay heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed kaliya si ay u fuliyaan shaqooyinkan iyaga oo ku hadlaya magacaaga waxaana waajib ku ah inayan u sheegin ama u isticmaalin ujeedo kale.
Nabadgelyada Macluumaadka Shakhsiyadeed ayaa muhiim noo ah, laakiin xusuuso inaanay jirin habka loo gudbiyo Internetka, ama habka kaydinta elektaroonigga waa 100% ammaan. Inkasta oo aan ku dadaalno inaan isticmaalno habab ganacsi oo la aqbali karo si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, ma balan qaadi karno amnigiisa.
Xidhiidhyada goobaha kale
Adeeggayaga waxaa ku jiri kara xiriirka boggaga kale ee aan annaga shaqeynin. Haddii aad gujiso xiriirka saddexaad, waxaa laguu diri doonaa goobta sadexaad ee xisbiga. Waxaan si xoogan kugula talineynaa inaad dib u eegto Siyaasadda Khaaska ah ee goob kasta oo aad booqatid.
Anagu ma xakamaynayno, mana qaadno masuuliyad ah mawduuca, siyaasadaha asturnaanta ama hawlaha qaybaha ama adeega sadexaad.
Adeegayagu maaha mid wax ka qabanaya qof kasta oo ka hooseeya da'da 18 ("Carruur").
Ma ogaanno macluumaadka shakhsi ahaan loo aqoonsan karo carruurta ka hooseysa 18. Haddii aad tahay waalid ama ilaaliye oo aad ka warqabto in ilmahaagu na siiyay macluumaad Shakhsiyeed, fadlan nagala soo xiriir. Haddii aan ogaanno in ilmo 18 uu na siiyay Macluumaadka Shakhsiyeed, waxaan isla markiiba ka tirtiri doonaa macluumaadka noocan ah.
U hoggaansanaanta sharciyada
Waxaan shaaca ka qaadi doonaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed oo keliya meeshii ay u baahan tahay si sharci ama subpoena ah loo sameeyo.
Isbedelada Siyaasadda Khaaska ah
Waxaa laga yaabaa inaan u cusbooneysiinno Siyaasadeena Qarsoodiga waqti ka waqti. Waanu kuu soo sheegi doonaa wixii isbeddel ah adoo soo diraya Siyaasadda Khaaska ah ee cusub ee boggan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad dib u eegisid Siyaasaddaan Khaaska ah si joogto ah isbedel kasta. Isbedelada Siyaasaddaan Khaaska ah waxay wax ku ool yihiin marka ay ku qoran yihiin boggan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Siyaasadda Khaaska ah, fadlan nala soo xiriir.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 22nd, 2020 .
DutchtownSTL.org Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah